Instagram Automation News : guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram - Facebook
Uzikhuphela njani iividiyo ze-Instagram kwi-iPhone yakho : guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram
Xa kuziwa ekuthumeleni iividiyo kwi-Instagram, unokhetho oluthile. Ungayixhasa inqaku lakho ngokusebenzisa iifilimu ezidubulayo zodwa okanye amabali amafutshane.. Ngaphandle koko, ungasebenzisa ulandelelwano olusuka kwiakhawunti esetyenziswe kwakhona. Zininzi iindlela zokukhuphela ividiyo ye-Instagram kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Izithuba zevidiyo ze-Instagram zinokukhutshelwa kwaye zigcinwe ngokuthe ngqo kwiqonga leendaba zentlalo. Inketho yamachaphaza amathathu e-Instagram ayisafumaneki ukugcina iiposti zevidiyo kwithala leencwadi lakho. Thatha umfanekiso wakhe, yirekhode njengevidiyo okanye uyigcine usebenzisa isoftware yomntu wesithathu ukuyigcina.
Unokukhuphela iividiyo ze-Instagram kunye nemifanekiso ukuba une-iPhone okanye i-iPad, kodwa hayi ngenye indlela. Imifanekiso ye-Instagram kunye neevidiyo zinokugcinwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo kwi-iPhone yakho, zonke ezo zisebenzisa inkqubo yokusebenza iOS.
Ngaphandle kwalo mda, usenako ukusebenzisa i-iPhone yakho ukujonga iividiyo ze-Instagram kunye nemifanekiso. Ngaphezu koko kule post, Ndiza kufunda ngakumbi malunga neendlela ezahlukeneyo zokugcina iividiyo ze-Instagram kunye neefoto kwi-iPhone yakho.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Enkosi kwi-Instagram Downloader, Gcina iividiyo ze-Instagram kunye neefoto kwi-smartphone okanye kwikhompyuter yakho.
Eyona ndlela ikhawulezayo nelula yokugcina iifoto ze-Instagram kukusebenzisa i-Instagram photo downloader. Enkosi kwizicelo ezininzi ezikhoyo kwi-App Store, Akuzange kube lula ukugcina iifoto ze-Instagram kunye neevidiyo kwifowuni yakho. Ukukhuphela iifoto kunye neevidiyo ze-Instagram kwifowuni yakho kulula. Ngaphandle koko, ukusetyenziswa ezininzi zazo simahla ngokupheleleyo. Ngaphandle koko, uninzi lwezi apps ziqulathe ukuthengwa kwe-app, ukuthengisa okugqithisileyo kunye namava omsebenzisi abonakalayo.
Awuwedwa ukuba awuyazi indlela yokukhuphela umxholo we-Instagram. Yikholwe okanye hayi, Silapha ukukunceda. Eyona vidiyo ilungileyo ye-Instagram kunye neefoto zokukhuphela zidweliswe ngezantsi.
i. Thumela kwakhona
\_Téléchargez des images et des vidéos Instagram pour les retweeter. I-Repost yifoto ye-Instagram edumileyo kunye nevidiyo yokulayisha ividiyo eyenza kube lula ukwabelana ngemifanekiso kunye neevidiyo. Ngenxa yoyilo olusebenziseka lula lweapp, wonke umntu oyisebenzisayo uyathanda ukusefa.
ii. Ugcino ngoko nangoko
Ugcino lwangoko, ngokuqhelekileyo kubhekiselwa kuyo ngomsebenzi wegama elinye, ikuvumela ukuba ugcine iifoto ze-Instagram kunye neevidiyo ngqo kwigalari yefowuni yakho ngaphandle kokuvula usetyenziso. Ukufaka ifoto okanye ividiyo, khuphela nje kwaye uncamathisele i-URL kwibar ye-URL yesicelo.
I-FastSave sisixhobo sokugcina i-Instagram esithandwayo esisebenza kuzo zombini izixhobo eziphathwayo kunye needesktops. Nokuba ifowuni yomsebenzisi ayiqhagamshelwanga kwi-Intanethi, useza kukwazi ukujonga nokukhuphela iifoto ze-Instagram.
ISaver Reposter yenza lula inkqubo yokugcina kunye nokuthumela kwakhona iifoto ze-Instagram. Ngaphambi kokuba wabelane ngeefoto kunye neevidiyo zakho nabanye, kufuneka uqale uzigcine kwikhamera yesixhobo sakho.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Iindlela ezimfutshane ze-App ikuvumela ukuba ukhuphele imifanekiso kwi-Instagram
Iindlela ezimfutshane zikuvumela ukuba ugcine iifoto kunye neevidiyo ze-Instagram kwi-smartphone yakho kwaye ufikelele kuzo kamva usebenzisa i-shortcuts app. Kwihlabathi elifanelekileyo, bekungayi kubakho enye indlela ngaphandle kokusebenzisa isoftware ekhethekileyo.
Landela nje imiyalelo yesikrini ukufaka indlela emfutshane yokukhuphela i-Instagram kwi-iPhone yakho.
i. Ukufikelela kwimenyu emva kokuthatha ifoto okanye ukurekhoda ividiyo, cofa isimboli ” … ” kwikona ephezulu ngasekunene yefoto okanye ividiyo. Ensuite, ungakhetha ukuba ungayigcina phi.
ii. Iindlela ezimfutshane zokukhuphela ze-Instagram zinokufumaneka emazantsi eprofayile yakho, ngezantsi nje kwendawo yeenketho zokwabelana.
iii. Xa usebenzisa indlela emfutshane okokuqala, uya kucelwa ukuba uvumele ufikelelo kuzo zombini i-intanethi kunye nengqokelela yeefoto zakho. Ungaze ubeke ukhuseleko lwakho emngciphekweni ngokusilela ukujonga yonke into phambi kokuba uzibophelele. Nje ukuba ifoto okanye ividiyo igqityiwe, igcinwa njengomfanekiso wedijithali kwigalari yeefoto kwisixhobo sakho sokugcina se-iPhone.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Unokufikelela ngokulula kumxholo we-Instagram ukusuka ngaphakathi kwi-App usebenzisa iJailbreak Mods.
I-Cydia yivenkile ye-iPhone eyaphukileyo ekuvumela ukuba ugcine iifoto ze-Instagram kunye neevidiyo ngaphandle kokufuna ukusebenzisa i-Instagram app.. Phakathi kwezinye izisombululo ezininzi ezikhoyo, ungasebenzisa i-Instagram ++ okanye i-InstaTools.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaKutheni ndilahlekelwa ngabalandeli baka-Instagram : Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisa
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaguqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram : guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram